'ए' डिभिजन लिगः मिलेमतोमा खेले कडा कारबाही
बुधबार, ४ आषाढ , २०७६
भूमिसुधारः कार्यकर्ता पोस्न फेरि अर्को आयोग !
प्रधानमन्त्रीले भने– “कांग्रेसले बालहठ देखायो”
कर्णाली नदीमा जीप खस्दा सबै यात्रु बेपत्ता
प्रमले पत्रकार सम्मेलनमार्फत गुठी विधेयकलगायत बारे भनाइ सार्वजनिक गर्ने
‘संसदीय समितिको निर्देशन पालना गर्न लोकसेवा बाध्यकारी हुँदैन’
कसले पहिले सम्बोधन गर्ने भन्ने विवादले संसद बैठक स्थगित
चीनमा भूकम्पबाट ११ जनाको मृत्यु, १२२ घाइते
इजिप्टका पूर्वराष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सीको अदालतमै निधन
‘खुच्चिङ्’ पत्रकार !
लुक्ला विमानस्थलमा चार दिनदेखि उडान ठप्प
सरकारको ‘अडिट’ गर
प्रधानमन्त्रीज्यू, कताको यात्रा ?
बझाङमा जीप दुर्घटना हुँदा ९ जनाको मृत्यु
चार दिनपछि डडेल्धुरा अस्पतालको सेवा शुरु
गुठी विधेयकबारे प्रधानमन्त्रीसँग उपत्यकाका सांसदहरूको छलफल
सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता र सहमतिप्रति सबै इमानदार हुनुपर्छ : अध्यक्ष दाहाल
सुपुर्दगी विधेयक रोकिए पनि हङकङमा रोकिएन प्रदर्शन, क्यारी लामको राजीनामा माग
डेंगु परीक्षण गर्ने किटमा कालोबजारी
बस दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु, २० घाइते
खेलकुदशुक्रबार, १२ आश्विन , २०७५
१३ असोजदेखि शुरु हुने शहीद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगितामा खेल मिलेमतो गरे कडा कारवाही हुने भएको छ।
अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)द्वारा गठित लिग कमिटीले खेल मिलोमतो रोक्न इन्ट्रिगिटी अधिकृतले विदेशमा तालीम लिएर आएको बताए।
लिग संयोजक विज्ञानराज शर्माले भने, “हामीले लिग हुने दुवै मैदानमा सिसी क्यामेरा राख्नेछौँ, यस्तै अर्को क्यामेरा पनि हुनेछ, म्याच फिक्सिङ भए फिफा र एएफसीको नियमअनुसार कारवाही गर्छाैँ ।” लिगका खेलहरु सातदोबाटोस्थित एन्फा मैदान र हल्चोकस्थित सशस्त्र प्रहरी बलको खेल मैदानमा हुनेछ।
साङ्गीतिक प्रस्तुतिका साथ लिगको उद्घाटन हुने जानकारी एन्फाले दिएको छ। नेपालका चर्चित कलाकारको प्रस्तुति रहने उक्त साङ्गीतिक प्रस्तुति ४५ मिनेटको हुनेछ।
उद्घाटनका अवसरमा विश्व फुटबल महासंघ (फिफा)का दक्षिण एशिया ‘रिजनल डेभलपमेन्ट अफिसर’ प्रिन्स रफस समेत नेपाल आउने एन्फाले जनाएको छ।
हल्चोकमा हुने लिगका खेलहरुको रु २०० र एन्फा कम्प्लेक्समा हुने खेलका लागि रु २०० र ५०० टिकट मूल्य राखिएको एन्फा महासचिव इन्द्रमान तुलाधरले बताए।
‘ए’ डिभिजन लिगका निर्देशक सञ्जिव मिश्रले लिगअघि शुक्रबार सबै १४ क्लबका प्रशिक्षकलाई राखेर ‘प्रि म्याच कन्फ्रेन्स’ आयोजना गरिने बताए।
उनका अनुसार, यसबाट सबै क्लबलाई आफ्नो तयारी र लिगको टार्गेटको बारेमा जानकारी हुनेछ ।
लिगको मार्के्टिङ र प्रमोसन पार्टनरको रुपमा रहेको रामसार मिडियाले पल्सर बाइकसँग ‘ए’ डिभिजन लिगको लागि टाइटल स्पोनसरको सम्झौता गरिसकेको छ । सम्झौतापछि लिग पल्सर शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको नामबाट सञ्चालन हुनेछ ।
चार वर्षपछि हुन लागेको लिगको उद्घाटन खेलमा न्युरोड टिम (एनआरटी) र विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबले प्रतिस्पर्धा गर्र्नेछन्।
लिगको दोस्रो खेल आइतबार संकटा क्लब र सरस्वती क्लबले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। दुई खेलपछि नेपालले बङ्गलादेशमा हुने बङ्गबन्धु अन्तर्रा्ष्ट्रिय गोल्डकपमा सहभागिता जनाउने भएपछि केही समयका लागि लिग स्थगित हुनेछ।
१४ ’ए’ डिभिजन क्लबले १६ माघसम्म खेल्ने लिगमा कुनै पनि क्लब रेलिगेसनमा जाने छैनन् ।
लिगमा थ्री स्टार, मनाङ मस्र्याङ्दी, नेपाल पुलिस, एपीएफ, आर्मी, जावलाखेल युथ क्लब, फ्रेन्ड्स क्लब, सङ्कटा, मछिन्द्र क्लब, सरस्वती युथ क्लब, च्यासल युथ क्लब, न्युरोड टिम (एनआरटी), ब्रिगेड ब्वाइज र हिमालयन शेर्पा क्लब रहेका छन् । राउण्ड रोविन लिगको आधारमा हुने प्रतियोगितामा कुल ९१ खेल हुनेछ।
लिगको विजेताले रु ५० लाख पाउनेछ। यस्तै लिग विजेता टोलीले एएफसी एशियन कप फुटबलमा सहभागिता जनाउन पाउने छन्। लिगको उपविजेताले रु ३५ लाख र तेस्रोले रु २५ लाख पाउने जनाएको छ।
लिगको चौँथो टोलीले रु १५ लाख, पाँचौ टोलीले रु सात लाख र छैटौँले रु पाँच लाख पाउनेछन्। फेयर प्ले टिमले रु एक लाख पाउने छन्। प्रत्येक खेल जितेबापत एन्फाले क्लबलाई रु ५० हजार तथा म्यान अफ दि म्याच खेलाडीलाई रु १० हजार दिने छन् ।
लिगको तयारीका लागि एन्फाले क्लबहरुलाई रु २० लाख उपलब्ध गराइसकेको छ ।
’ए’ डिभिजन लिग चार वर्षपछि हुन् लागेको हो। पछिल्लो पटक विसं २०७१ सालमा ‘ए’ डिभिजन लिग भएको थियो।
मंगलबार, ३ आषाढ , २०७६ भूमिसुधारः कार्यकर्ता पोस्न फेरि अर्को आयोग !
मंगलबार, ३ आषाढ , २०७६ प्रधानमन्त्रीले भने– “कांग्रेसले बालहठ देखायो”
मंगलबार, ३ आषाढ , २०७६ सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लियो
मंगलबार, ३ आषाढ , २०७६ कर्णाली नदीमा जीप खस्दा सबै यात्रु बेपत्ता
टिप्पणी ‘खुच्चिङ्’ पत्रकार !
सम्पादकीय सरकारको ‘अडिट’ गर
रिपोर्ट प्रधानमन्त्रीज्यू, कताको यात्रा ?
‘संसदीय समितिको निर्देशन पालना गर्न लोकसेवा बाध्यकारी हुँदैन’ हिमालखबर
‘झन्झटिला प्रक्रियाले विदेशी लगानीकर्ता ल्याउन गाह्रो’ हिमालखबर
‘सीपीडी कार्यक्रमःचिकित्सकको व्यावसायिक विकासमा कोसेढुंगा’ रामु सापकोटा
सोमबार, २७ जेठ , २०७६ यूट्युबर समीक्षकलाई थप एक दिन हिरासतमा राख्ने आदेश
सोमबार, २७ जेठ , २०७६ सांगीतिक यात्राको ५० औं वर्षगाँठकाे अवसरमा ‘दीप श्रेष्ठ एकल साँझ’
शनिबार, २५ जेठ , २०७६ नारी भोगाइमा समयचेत
शुक्रबार, २४ जेठ , २०७६ देवदह चिनाउन बुद्ध-कला